“ख्रिष्टमस र यसको सान्दर्भिकता” - Nepali Christians Site
“ख्रिष्टमस र यसको सान्दर्भिकता”
Posted by Nepali Christian on December 19, 2013 at 3:06pm
ख्रिष्ट आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो : संसारको उत्पत्ति र यसको अन्त्यका विषयमा सबै दार्शनिक, वैज्ञानिक र धर्मगुरु तथा धर्मशास्त्रहरुका आ–आफ्नै बिचार र वा धारणा रहेका छन् । तथापी सुन्यताबाट नै संसारको सृष्टि भएको हो र यो संसार नासवान छ, एकदिन अवस्य बिलेर जान्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । यस सन्दर्भमा विश्वमा स्थापित भएको ख्रिष्टियन मत र त्यसको श्रोत पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलका विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ । जसले यस संसारभन्दा अघिल्लो समय र पछि संसार बितिसकेपछि कस्तो अवस्था हुनेछ ? भन्ने बारेमा स्पष्ट किटान गरेको छ । यसैलाई आधार मानेर केही पश्चिमाहरुले तत्कालै यो वा त्यो समयमा संसारको नष्ट हुने दावी गर्दै आएका छन् तर उनीहरुले बाइबल राम्ररी अध्ययन नै गरेका छैनन् ।
संसारको उत्पत्तिभन्दा अघि नै त्रि—एक परमेश्वरको अस्तित्व थियो । परमेश्वरलाई हाम्रो पापी भौतिक आाखाले देख्न सकिदैन, छालाले छुन सकिदैन तर आत्माले बुझ्न, चिन्ह, हेर्न, संगत गर्न र जीवन जिउन सकिन्छ । उहाा आत्मीक हुनुहुन्छ । उहााको भौतिक शरीर छैन । त्यसैले उहाालाई देख्न सकिदैन । सुन्यताको एक समयमा परमेश्वर परिभ्रमण गरिरहनु भएको थियो । उहााले दिन र रात छुट्याउनु भयो, आकास र पृथ्वी अलग–अलग गराउनु भयो, बोट विरुवा, बनस्पति आदिको सृष्टि गर्नुभयो, सुर्य चन्द्र, तारा आदि सृष्टि गर्नुभयो, जलचर, थलचर सबै जीवजन्तु र प्राणीहरको सृष्टि गर्नुभयो । यो समय जम्मा पााच दिनको मात्रै थियो । छैटौं दिनमा परमेश्वरले भूमिको माटो लिएर उहााकै स्वरुपमा मानिसलाई बनाउनु भयो र नाकको प्वालबाट जीवनको स्वास फुकिदिनुभयो । यसरी छैटौं दिनमा संसारको यावत थोकको सृष्टि परमेश्वरले नै गर्नुभयो । सातौ दिनमा उहााले विश्राम गर्नुभयो । यो तथ्य अकाट्य छ ।
त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि मध्येको सबैभन्दा उत्तम भन्नुभयो र सृष्टिका सारा थोक मानिसको अधिनमा छोड्नु भयो तर, मानिसले (आदम र हब्बा जो पहिलो मानिस थिए) परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गरेनन् र अनाज्ञाकारी भए । मानिस आफ्नै इच्छामा, दुष्ट, खराब बिचारमा लालायीत भयो । त्यसपछि मानिसमा पाप स्वभावले काम गर्‍यो । परमेश्वर पापरहित हुनुन्थ्यो । उहाा पवित्र हुनुहुन्छ । त्यसैले मानिस परमेश्वरको महिमा गर्नबाट चुक्यो । पापमा फसेपछि उसले जीवनको सट्टामा मृत्यु पायो । ‘जसले जे रोप्छ त्यसले त्यसैको कटनी गर्छ ।’ कोदो रोप्नेले त्यस ठाउामा धान कटनी गर्न सक्दैन । जुन स्वभाविक थियो । शैतान परमेश्वरको प्रमुख विरोधी शक्ति हो । परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो तर शैतानले मानिसमा प्रभाव जमाए पछि परमेश्वरबाट मानिस टाढा भयो । किनकी एउटा नोकरले दुईवटा मालिकको सेवा गर्न असल हुादैन यो कटुसत्य हो ।
तर, परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिलाई त्यसै खेर जान दिनु असल ठान्नु भएन । अब्राहम, इसाक, याकुब जस्ता व्यक्तिलाई उहााले अगुवाई गरेर आफ्नो महिमाका लागि तयार गर्दै हुनुहन्थ्यो । उहााले त्यही वंशलाई आफ्नो महिमाका खातिर निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो । एक जोडि मानिस परमेश्वरले आफ्नै हातले बनाउनु भयो अनि पछि त्यही मानिसलाई सन्तान बृद्धि गर्ने आशिष दिनुभयो । त्यहीकारण आज संसारमा विभिन्न जाति र राष्ट्रमा विकास भई मानिसहरु छरिएर रहेका छौं । यद्यपी मानिस आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख बन्दै गयो । सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आराधना गर्न छाडेर उहााद्वारा सृष्टि भएका थोकहरुलाई अंगाल्न पुगे । जुन परमेश्वरलाई पटक्कै मन परेको थिएन । त्यसैले योजनाबद्ध तरिकाले पापी मानिसलाई धर्मि तुल्याउन, पवित्र बनाउन परमेश्वर आफैं मानिस बनेर संसारमा आउने अठोट गर्नुभयो । उहााले आफ्नो सन्देश विभिन्न अगमवक्ता खडा गरेर मानिसकहा पठाउनु भयो तर कसैले त्यसलाई वास्ता गरेनन् । खासगरी संसारको बिचभाग इज्रायललाई उहाले सुरुबाटै स्थापित गर्नुभयो अनि त्यही इज्रायलमा आजभन्दा करिब २०१२ वर्ष अघि यहुदी जाति भित्र मरियम भन्ने कन्ये केटीको गर्भमा पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भई ठीक समयमा बालकको रुपमा संसारमा जन्मनु भयो जसको नाउा येसु ख्रिष्ट हो । उहााको जन्मको विषयमा करिब ७ सय वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी भएको थियो ।
येसुको जन्मप्रतिको शंका भ्रममात्रै हो :
प्राय: संसारभर चर्चा र छलफलको पात्र बनेका एक व्यक्ति, हरेक राज्यमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले उच्चारण गर्ने नाम हो “येशू” । उनै येशूको ऐतिहासिकतामाथि शङ्गा गर्दै दार्शनिक बेट्राण्ड रस्सेलले लेखे “ऐतिहासिक रुपमा ख्रीष्ट अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा शङ्कास्पद छ, उहाा हुनुहुन्थ्यो भने पनि हामी उहााको विषयमा केही पनि जान्दैनौं ।” ऐतिहासिक साक्षीहरुलाई जााचेर हेर्दा रस्सेलको यस्तो भनाई वास्तवमा हास्यास्पद देखिन्छ । नयाा नियमका सत्ताइस ओटा पुस्तकहरु मात्र होइन, यहुदी सन्दर्भहरु र सेकूलर (गैरयहुदी, गैरख्रीष्टियन) सन्दर्भहरुले पनि येशूको ऐतिहासिकता बारे प्रचुर मात्रामा श्रोतहरु जुटाई सकेका छन् । रोमी इतिहासकार कर्नेलियास टासिटास, यहुदी इतिहासकार योसिफ, ग्रीक व्यङ्ग्यकार लुसियन, सुटोनियस प्लिनी द योङ्गर, थल्लुस, फ्लेगन, मारा बार, सेरापिओन सलगायत सेकुलर श्रोतहरुका केही उदाहरणहरु हुन् । ब्रिटानिका विश्वशब्दकोषको १९७४ ख्रीष्टाब्द संस्करणमा येशूको जीवनी तयार गर्नलाई २० हजार शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ । अरिस्टोल, सिसेरो, अलेक्जेण्डर, जुलियस, कैसर, बुद्ध, कन्फ्युसियस, मोहम्मद र नेपोलियन बोनापार्टलाई दिइएको ठाउाभन्दा बढी हो यो । प्राचिन समयमा ख्रीष्टयमतका प्रतिद्वन्द्वीहरुले पनि येशूको ऐतिहासिकता माथि कहिल्यै शंका गरेनन् । ख्रीष्टिय मतका संस्थापक वास्तवमै अस्तित्वमा थिए भनी स्वीकार नगरी ख्रीष्टियान मण्डलीको उद्देश्य सु–समचारीय विवरणहरु र यसका पछाडी रहेका परम्पराको प्रवाहलाई व्याख्या गर्न कठिन मात्र होइन असम्भव पनि छ । कुनै पनि प्रतिष्ठित विद्वानले ऐतिहासिक अस्तित्वलाई इन्कार गर्ने शाहस कहिल्यै गरेका छैनन् । येशूको ऐतिहासिकतालाई इन्कार गर्नु वास्तवमा मूर्ख बन्नु हो ।
येसुको जन्मदिन मनाउने ऐतिहासिक अभ्यासहरु :
येशूको ऐतिहासिकता माथि शंका गर्नु अस्वभाविक भए पनि उहााको जन्मदिनबारे शंका गर्नुचााहि स्वभाविकै हो । मत्ति र लुकाको सु–समचारमा उहाको जन्मको विवरण दिएको भए तापनि नयाा नियमको कुनै पनि पुस्तकमा उहाको जन्म दिन उल्लेख नभएकाले उहाको जन्मको बास्तविक मिति कसैलाई पनि थाह छैन । ख्रीष्टमस शब्द ९ऋजचष्कतmबक० अंग्रेजीमा र यसको नेपाली लिप्यान्तरण हो । येशू ख्रीष्टको जन्मको सम्झनामा मनाइने पर्व नै ख्रीष्टमस हो । बाइबल धर्मशास्त्रमा उहााको जन्ममिति उल्लेख नभएकाले प्रारम्भिक ख्रीष्टियानहरुको बीचमा कुनै निर्धारित मिति थिएन । चौथो शताब्दीको उत्तराद्धतिर ख्रीष्टमस भिन्नाभिन्नै मितिमा भए पनि प्राय: जसो मण्डली (चर्च) मा मनाइन थालिएको थियो । उहााको जन्मदिन निर्धारण गर्न विभिन्न विधिहरु अपनाए । परिणामत: प्रारम्भिक ख्रीष्टियान चर्चहरुमा बेग्ला–बेग्लै मितिहरु देखा परे । जनावरी २, अप्रिल १८, मे २० र डिसेम्बर २५ त्यस्ता मितिहरु थिए । तर डिसेम्बर २५ (पौष १०) नै ख्रीष्टमसको लागि औपचारिक मिति हुन पुग्यो । डिसेम्बर २५ लाई नै येशूको जन्मदिनको रुपमा मनाइएको खास कारण प्रष्ट छैन, यद्यपी केही मतहरु अघि नसारिएका पनि होइन । प्रत्येक डिसेम्बर महिना ३१ तारिखको हुनेगर्छ । येशू जन्मेको आठौं दिनमा उहाको बाल अर्पण अर्थात् न्वरान गरिएको थियो । त्यस दिनलाई नै जनवरी एक मानिएको हो र जनवरी एक पुग्नलाई आठ दिन मान्नु पर्दा डिसेम्बर २५ नै हुनुपर्छ भन्ने धेरै इतिहासकारहरुको मत रहेको छ । अर्कोतर्क, सम्भवत: त्यस समयमा मनाइने गैरख्रीष्टियान पर्वले गर्दा उक्त मितिमा ख्रीष्टमस मनाउनलाई प्रभाव पारेको थियो । नयाा नियमले यसको विषयमा कुनै सङ्केत दिादैन । विश्वव्यापी कालानुक्रमलाई उत्पादन गर्ने पहिलो ज्ञान ख्रीष्टियन इतिहासकार सेक्टस जुलियस अफ्रिकानसले ख्रीष्टाब्द २२१ मा पहिलो पटक डिसेम्बर २५ लाई येशूको जन्म दिनको रुपमा परिचित गराएका थिए ।
चौथो शताब्दीमा ख्रीष्टिय–मत रोमी सम्राष्टको सरकारी धर्म भइसकेको थियो । १२ औं शताब्दीमा आइपुग्दा ख्रीष्टमस यूरोपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व भएको थियो । सुधारवादी युगसम्म ख्रीष्टमसको लोकप्रियता ज्यादै बढ्यो । ख्रीष्टमसमा गैरख्रीष्टियानहरुको मनग्ये चालचलनहरु समावेश भएकाले सुधारवादको समयमा धेरै ख्रीष्टियानहरुले ख्रीष्टिमसलाई गैरख्रीष्टियान पर्वको रुपमा विचार गर्न थाले । कति ठाउाहरुमा यसको असर परेको भए पनि मानिसले ख्रीष्टमस मनाउन जारी राखे । २० औं शताब्दीमा विभिन्न किसिमका व्यवसायका लागि ख्रीष्टमसको पर्व ज्यादै महत्वपूर्ण हुन थाल्यो । २० औं शताब्दीको मध्यदेखि ख्रीष्टमस झण्डै विश्वव्यापी रुपमा मनाइन थालिएको छ । संसारभरी नै करोडौं ख्रीष्टियानहरुको लागि ख्रीष्टमस सबैभन्दा खुशीको क्षण र सबैभन्दा व्यस्त समय हो । जुन आज संसारका हरेक कुना–कुनामा ख्रीष्ट येशूका विषयमा कुरा हुने गरेको छ ।
ख्रिष्टमससँग जोडिएका अन्य संस्कारहरु :
ख्रीष्टमससाग गासिएका थुप्रै चलनहरु विभिन्न देशबाट विभिन्न समयमा आएका छन् । ख्रीष्टिमसको समयमा उपहारहरु साटासाट गर्ने प्राचीन रोमबाट आएको हो । १८ औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा परिवारका सदस्यबीच साटासाट गर्ने अभ्यास राम्ररी नै स्थापित भइसकेको थियो । उपहार लेनदेनले हामीलाई परमेश्वरले एकलौटे पुत्र दिनुभएको तथ्यको सम्झना गराउाछ । बुद्विमान मानिसहरु (ग्रीकमा mबनष्, नेपाली बाइबलमा ‘ज्योतीषीहरु’ भनी अनुदीत) द्वारा येशूलाई गरिएको भेटमा उपहारहरु चढाइएका छन् । ख्रीष्टमस वृक्ष (ऋजचष्कतmबक तचभभ) को जर्मनीले ल्याएको हो । पुर्नजागरण –कालीन मानवअधिकारवादी लेखक सेवास्टियन ब्राण्डले ख्रीष्टाब्द १४९४ मा लेखेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साहित्य “मूर्खहरुको जहाज” नामक कृतिमा घरहरुमा देवदारु वृक्षका हाागाहरु राख्ने चलनलाई अभिलिखित गरेका छन् । ख्रीष्टमस वृक्षको परम्परा सुनिश्चित मिति र उत्पत्तिको सम्बन्धमा केही अनिश्चितता भएपनि स्याउहरुसाग सजाइएका देवदारु रुखहरु पहिलो पटक ख्रीष्टाब्द १६०५ मा स्ट्रास्वर्गमा जानकारीमा आएजस्तो देखिन्छ । यस्ता रुखहरुमा प्रयोग गरिएका मैनबत्तिहरु ख्रीष्टाब्द १६६१ मा सायलसियनद्वारा अभिलिखित गरेका छन् । ख्रीष्टाब्द १८४३ मा पहिलो ख्रीष्टमस कार्ड वृष्टिस नागरिक जेसी हर्सनद्वारा रचना गरिएका थिए । यो आधुनिक पोष्टकार्ड जस्तै थियो र यसमा लेखिएको शब्दहरु यस्ता थिए – ‘मेरी ख्रीष्टमस’ ९:भचचथ ऋजष्चकतmबक बलम ज्बउउथ ल्भध थ्भबच तय थ्यग।० । क्यारोल ९ऋयचय०ि भन्ने शब्द प्रचीन फ्रान्स शब्दबाट आएको हो । वर्तमान समयमा क्यारोलमा गाइने थुप्रै भजनहरु १८ औं र १९ औं शताब्दीमा रचना गरिएका थिए । जसमध्ये केही नेपालीमा अनुदीत छन् । चर्चित ख्रीष्टमस भजनहरुमा चाल्र्स वेस्लीद्वारा लिखित नेपालीमा “सुन स्वर्गदूतको गान” छ ।
ख्रीष्टमसका सन्ध्यामा ख्रीष्टाब्द १८१८ मा जोसेफ मोहरद्वारा लिखित नेपालीमा अनुदीत “शान्तमय रात” (भजन नं. ३१) आदि पर्दछन् । यसका अतिरिक्त ख्रीष्टमस भोज घर/मण्डली भवनको सजावट आदि चलनहरु पनि ख्रीष्टमससागै गाासिएर आएका छन् ।
ख्रिष्टमस मनाउन हुँदैन भन्ने तर्क:
ख्रीष्टमस पर्वको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरुको समूह विगतमा पनि थियो र अहिले पनि कायमै छ । उनीहरुले अघि सार्ने पहिलो र महत्वपूर्ण तर्क हो – ख्रीष्टमसबारे बाइबल मौन छ । यो भनाई सत्य हो तर मण्डलीमा अभ्यास गरिने अन्य थुप्रै क्षेत्रहरुमा पनि बाइबल मौन छ । बु्धबारको प्रार्थना संगती (घरेलु संगती) झण्डै विश्वव्यापी छ । भजनपुस्तक, मण्डली भवन, ख्रीष्टियान पत्रपत्रिका आदिवारे बाइबल मौन छ । “प्रेरित पावलले मोटरबाइक चढेर हामीले चढ्ने ?” भन्ने प्रश्न कहिले काही केही ख्रीष्टियान पटमूर्ख अगुवाहरुले मुखबाट ओकल्ने गर्छन् । म विश्वास गर्छु कि पावल अहिले बााचेका भए, पावललाई परमेश्वरले हेलिकप्टरमा चढाएर सु–समचारमा लैजानुहु हुन्थ्यो । पावल बााचेको समय र वर्तमान समयबीचको भिन्नतालाई बुझ्ने बाइबलका विद्यार्थीहरुले कहिल्यै त्यस्तो प्रश्न गर्ने शाहस गर्दैन । यस्ता अनगिन्ती कुराहरु छन् जसको विषयमा बाइबल मौन छ, यद्यपी मण्डलीमा ती अभ्यास गरिादै आएका छन् ।
दोस्रो तर्क हो – ख्रीष्टमस ख्रीष्टको जन्मदिन होइन । यो भनाइ पनि झण्डै पूर्णत: सत्य छ । तर ख्रीष्ट ऐतिहासिक मानिस हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य स्वीकारेको छ भन्ने पर्याप्त प्रमाण छ । त्यसो हो भने ख्रीष्ट एक न एक दिन पक्कै जन्मनु भएको हो । डिसेम्बर २५ को विरोध गर्नेहरुले विकल्पको रुपमा अर्को दिन निर्धारण गर्न नसक्ने भएकोले, उहााको ऐतिहासिकता शङ्कारहित भएको ख्रीष्टमस ख्रीष्टको जन्मदिन होइन भन्नु पनि व्यर्थ छ । अधिक वर्षको फेब्रुअरी २९ मा जन्मेको बालकको जन्मदिन चार वर्षमा एकचोटी मात्र मनाउने हो र ? कतिपय अवस्थामा मिति होइन, विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तेस्रो तर्क – ख्रीष्टमसको चलन ग्रैरख्रीष्टियानहरुबाट र यो विशेष गरेर रोमन क्याथोलिक उद्भव हो । तर हाम्रो प्रचलनमा रहेका अनगिन्ती नाउाहरुको उद्भव गैर ख्रीष्टियान नै छन् । जस्तै : जनवरी भन्ने अंग्रेजी महिनाको नाम रोमी देवता जेनसबाट लिइएको हो । हामीले प्रयोग गर्ने बारका नाउाहरुमा देवीदेवताका नामहरुसाग सम्बन्धित छन् । सण्डे (आइतबार) सूर्य देवताको नाउा भएकोले आइतबारको दिनमा आराधना गर्नु हुादैन भन्ने तर्क सेभेन्थ डे आडभेन्टिष्टहरुको रहेको छ तर तिनीहरुलाई शनिबारको उत्पत्ति पनि शनि देवताबाट आएको भन्ने कुरा थाह छैन कि क्या हो ?
चौथो तर्क – ख्रीष्टमसमा पियकडपन र अनैतिकता बढी हुन्छ । शनिबारमा अनैतिकता वा दुर्घटना बढी भयो भन्दैमा आराधनाको दिन सार्न मिल्छ र ? हवाइजहाजको दुर्घटनाले हवाइविज्ञानलाई असफलता तुल्याउाछ र ? दुर्घटना हुन्छ भनेर धरान देखि काठमाण्डौसम्म हिडेर जाने व्यक्ति कोही छ र ?
अन्त्यमा, येशू संसारका सम्पूर्ण मानिसहरुको उद्धार र मुक्तिका लागि संसारमा देहधारी भई आजभन्दा २ हजार वर्ष पहिला आउनु भएको थियो । उहाले अनन्तको राज्यका बारेमा हामीलाई सिकाउनु भई स्वर्गमा चढिजानुभएको छ । उहा फेरि हामीलाई लिन संसारमा आउनु हुन्छ तर त्यो समय ज–जसले उहाामाथि विश्वास गरेका छन्, उनीहरु मात्रै उहााको साथमा जान पाउने छन् । तसर्थ के तपाई यो सुखद् क्षण, खुशीको खबरलाई आत्मासात् गर्नुहुन्छ ? यदि हुन्छ भने उहाको नाउमा आफ्नो जीवन सुम्पनुहोस् । यो ख्रिष्टियानहरुको अरु धर्मावलम्बीहरुको चाड, पर्व जस्तो धार्मिक चाड होइन । एउटा विशेष अर्थ बोकेको र ख्रिष्ट येसुको विषयमा प्रचार गर्ने तथा सु–सन्देश सुनाउने सुनौलो अबसर हो । सबैलाई ह्याप्पी ख्रीष्टमस !!
गिदोन लामिछाने (तारा) Views: 130
Tags: article, christmas Like 1 member likes this
Comment by Ezekiel Rai on December 19, 2013 at 8:53pm ramro jankari ko lagi dhanyabad.... parbhule ashis diun .... RSS